Previous Article Gọvanọ Obianọ agbapeela amụmà mmiri ọñụñụ abụọ n'Anambra
Next Article N'Anambra: Gọọmenti abagidela n'ịkụtùsì ụfọdụ ihe a rụrụ n'ebe ezighị ezi
Mmemme inyefè ihe oriri ahụ n'aka gọọmenti bụ nke weere ọnọdụ na nso nso a n'obí gọọmenti dị n'Awka, ma bụrụkwa nke ụfọdụ ndị so n'òtù ọrụ gbanụ gbanụ ahụ gọọmenti steeti ahụ guzobere maka ọrịa ahụ sonyèrè na ya.
Oge ọ na-enyefè ihe ndị ahụ n'aka gọọmenti, onye na-ahụ maka mmekọrịta ụlọọrụ ahụ na ọhaneze, bụ Maazị Abdulfata Abdulraheem kèlèrè ọchịchị steeti ahụ maka mbọ dị iche iche ọ gbagòrò nà ihe o mepụtagoro n'agha ahụ ọ na-ebu megide mgbasa ọrịa ahụ nà mmetụta nke oge ihe isi ike a n'ebe ụmụafọ steeti ahụ nọ.
O mere ka a mara na ọ bụ ihe ndị ahụ mèrè ha jiri kpebie ịbịa kwàdo ọchịchị steeti ahụ, iji ịsị ya jide ka o ji n'agha ahụ ọ na-ebu; ma gosipụtakwazie olileanya o nwere na ọrịa ahụ ga-emechaa bụrụ ihe akụkọ.
Na nzaghachi oge ọ na-anabata ihe ndị ahụ n'aha gọọmenti Anambra, ode akwụkwọ gọọmenti steeti ahụ, bụ Ọkammụta Solo Chukwulobelụ kèlèrè ụlọọrụ ngo ahụ maka ịza ọkpụkpọ òkù gọọmenti kpọrọ maka nkwàdo ọhaneze n'agha ahụ ọ na-ebu megide korona. O kelekwara ụlọọrụ ahụ maka etu o si ememìla ma na-ebuso mbize agha na steeti ahụ, ma kpọkuo ha ka ha jisie ike n'ọrụ dị iche iche ha na-abagide.
O jikwazị ohère ahụ wee kelekwa ndị dị iche iche nyegoro gọọmenti steeti ahụ nkwado n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji sị ya jisie ike n'imemìlà ọrịa ọjọọ ahụ, me kwenwòó nkwà na a ga-aga n'ihu ịdị na-etinye ihe ndị ahụ niile n'ọrụ nke ọma dịka o siri kwesi.
Ihe erimeri dị iche iche ụlọọrụ ahụ bùnyere gọọmenti ụbọchị ahụ gụnyèrè akpa osikapa dị otu narị na iri atọ, tínyéré igbe erimeri noduul ruru narị abụọ n'ọnụọgụgụ.